Fandrobana tany Mahitsy : Nidoboka am-ponja ireo jiolahy nangala-jaza -
AccueilSongandinaFandrobana tany Mahitsy : Nidoboka am-ponja ireo jiolahy nangala-jaza
Voasambotra avokoa ireo andian-jiolahy miisa fito fantatra fa tompon’antoka tamin’ny fangalaran-jaza sy fanaovana takalon’aina zazavavavikely vao 5 taona rehefa nitazona ity farany nandritry ny efatra andro. Fantatra nandritry ny fakana am-bavany ireto farany tamin’izany fa nisy vehivavy iray izay voatonona ho niray tsikombakomba tamin’ireto andian-jiolahy nanao ny asa ratsy. Raha tsiahivina mantsy dia ny 21 aprily lasa teo no tena nitrangan’ity fandrobana miaro herisetra ity, izay niainga tamina fanatanterahana fandrobana tao amin’ny tokantranona mpandraharaha iray mipetraka eny Mahitsy. Araka ny fampitam-baovao dia fandrobana efa nomanina hatry ny ela mihitsy ity niseho ny andron’ny sabotsy hariva ity, izay niditra an-terisetra ireo jiolahy miisa efatra tamin’ireo raha fantatra fa tany ivelany kosa ny namany, izay nilaza fa fantatry ny tompon-trano. Tamin’ny fanazavan’ny tompon-trano nandritry ny nanolorana fampanoavana ny raharaha anefa dia olona efa tsikaritra sy mahafantatra ny zava-misy ao amin’io trano io ihany no mahafantatra ny fitoeram-bola ankoatra azy ireo, hoy ihany ny voalazany.
Notanana am-ponja avokoa moa ireo fito lahy voapaingotra tamin’ny fanatanterahana fandrobana sy takalon’aina ireo, raha nahafahana vonjimaika kosa ilay vehivavy atidoha tamin’ny fampidirana olon-dratsy tao amin’ny tranon’ny mpampiasa azy, omaly.